FAQ/User Guide – AYAPAY DIGITAL WALLET
AYA Pay Agent
Self Registration	Level2KYC Upgrade	Bank Account Linkage	Forgot Pin	Wallet To Wallet Transfer	Mobile Top Up	Cash In via MPU	Visa Prepaid Card Top Up	Cash In Visa Credit Card
Level2KYC Upgrade
Cash In via MPU
Visa Prepaid Card Top Up
Cash In Visa Credit Card
AYA PAY Account
AYA Pay ရဲ့ မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် ကို မည်သည့် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သနည်း။ Expand
AYA Pay ရဲ့ မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် ကို MPT, Telenor, Ooredoo, My Tel အစရှိသည့်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။။
AYAPay နှင့် AYA Mobile Banking မတူသည့် အဓိကအချက်ကို သင်သိပါသလား။ Expand
AYA Bank ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်စရာမလိုပဲ နီးစပ်ရာ AYA Pay Agent များတွင် ငွေဖြည့်ခြင်း ၊ ငွေလွဲခြင်း ၊ ငွေပေးချေခြင်း စသည်တို့ကိုဆောင်ရွှက်နိုင်ပါသည်။
AYA Pay Mobile Wallet Application ကိုသင် ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ။ Expand
● ပိတ်ရက်မရှိ ၂၄နာရီ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
● AYA Pay တွင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ရိုးရှင်း၍ နားလည်လွယ်ခြင်း၊
● မိမိဝယ်ယူသုံးစွဲပြီးသော စာရင်းများ၊ ငွေလွှဲစာရင်းများ ( transaction history) ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
● AYA Pay Wallet အချင်းချင်း ဝန်ဆောင်ခပေးစရာမလိုဘဲ ငွေလွှဲ၊ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း၊
● ငွေသားကိုင်ဆောင်မှုကို လျော့ချနိုင်ခြင်း၊
● QR Code ကိုScan ဖတ်ရုံဖြင့်လျှင်မြန်စွာငွေပေးချေနိုင်ခြင်း၊
● လုံခြုံရေးစနစ်မြင့်မားမှုကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
● ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့်ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်၊ငွေလွှဲ၊ငွေပေးချေမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
အစရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် AYA Pay Mobile Wallet ကို သုံးသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
AYA Pay Application ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက် ငွေလွှဲလိုသောအခါ ဘဏ်သို့ သွားရန်လိုအပ်ပါသလား။ Expand
ဘဏ်သို့သွားစရာမလိုပဲ Mobile Phone ရှိရုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
AYA Pay Mobile Wallet Application မည်သို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရပါသနည်း။ Expand
Google playstore၊ & Apple App Store နှင့် website (ဝက်ဘ်ဆိုဒ်) တို့မှ အခမဲ့ ‌ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
AYA Payသုံးစွဲသူအကောင့် အဆင့် ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ။ Expand
AYA Pay သုံးစွဲသူအကောင့် Level 1 & Level2နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
Level 1 သုံးစွဲသူအကောင့်ဖွင့်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ် လိုအပ်ပါသည်။
Level2သုံးစွဲသူအကောင့်ဖွင့်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊အမည်၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊မွေးသက္ကရာဇ်၊ Gender ၊ မှတ်ပုံတင်(မူရင်း) အရှေ့နှင့်အနောက် ၊ ဖခင်အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ တို့လိုအပ်ပါသည်။
AYA Pay သုံးစွဲသူအကောင့် အဆင့် ၁ဖွင့်ရန် မည်သည်တို့ လိုအပ်ပါသနည်း။ Expand
AYA Pay Application ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ၍ မိမိ၏ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မွေးနေ့၊ ကျား/မ အစရှိသည်ကို ဖြည့်၍ ကိုယ်တိုင်စာရင်းသွင်း၊ အကောင့်ဖွင့်ပြီး စတင်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
AYA Pay သုံးစွဲသူအကောင့် အဆင့် ၂ဖွင့်ရန် မည်သည်တို့ လိုအပ်ပါသနည်း။ Expand
AYA Pay Application ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ၍ မိမိ၏ အမည်၊ဓာတ်ပုံ ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မွေးနေ့၊ ကျား/မ အစရှိသည်ကို ဖြည့်၍ ကိုယ်တိုင်စာရင်းသွင်း၊ အကောင့်ဖွင့်ပြီး စတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
AYA Pay Application ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ၍ သင်၏ ဧရာဝတီဘဏ်ငွေစာရင်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ငွေလွှဲလက်ခံရရှိသူသည် မည်သည့်နေရာများတွင် ငွေသွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်သနည်း။ Expand
နီးစပ်ရာ AYA Pay agents များ နှင့် နီးစပ်ရာAYA ဘဏ်ခွဲ များတွင်သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
AYA Pay Application ကိုသုံးစွဲသူလုံခြုံမှုရှိအောင် မည်သို့ပြုလုပ်ထားပါသလဲ။ Expand
AYA Pay မှသူံးစွဲသူတို့စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါစနစ်တို့ကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။
• AYA သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိ၏ AYA Pay အကောင့်အသုံးပြုလျက်ရှိနေသော ဖုန်းများကို ခြေရာခံနိုင်ခြင်း
• လက်ရှိသုံးစွဲနေသော Smart Phone မှလွဲ၍ တခြားဖုန်းများတွင် log in ဖြစ်နေပါက မူရင်း AYA Pay သုံးစွဲသူ အကောင့်မှ log out ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
AYA Pay မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် Application အသုံးပြုရန် အခက်အခဲ ၊ အဆင်မပြေမှုများရှိပါက မည်သို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သင့်သလဲ။ Expand
AYA Pay messenger မှ တဆင့်သော်လည်းကောင်း ၊ AYA Pay Call Ceneter - Hotline phone numbers 5777,01-4705777 များသို့ဖြစ်စေ ခေါ်ယူဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
AYA Pay မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် Application ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်းပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးသွားပါက မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သလဲ။ Expand
သင့်ဖုန်းပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင် AYA Pay Call Ceneter - Hotline phone numbers 5777,01-4705777 ဖုန်းသို့ သင့်အကောင့်အား ပိတ်ပေးပါရန်နှင့် အကောင့်အသစ်တစ်ခုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
AYA Pay မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်သုံးစွဲသူ၏ ဖုန်းပျောက်ခဲ့လျှင် အကောင့်သည် အလိုအလျောက် ပိတ်သည့် (auto lock) စနစ် ပါရှိပါ သလား။ Expand
အလိုအလျောက် ပိတ်သည့် (auto lock) စနစ် မပါရှိပါ။
သို့သော် AYA Pay Call Ceneter - Hotline phone numbers 5777,01-4705777 ကိုချက်ချင်းဖုန်းဆက် အကြောင်းကြား၍ ပိတ်နိုင်ပါသည်။
AYA Pay Contact Center ကိုဆက်သွယ်၍ မရပါက နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲသို့သွား၍ လည်းပိတ်နိုင်ပါသည်။
နီးစပ်ရာ AYA Bank ဘဏ်ခွဲများနှင့် AYA Bank ATMs များ၏ တည်နေရာများကို မည့်သို့သိနိုင်သနည်း။ Expand
AYA Pay Mobile wallet ထဲတွင်ရှိသော Locationမှတဆင့် နီးစပ်ရာ AYA Bank ဘဏ်ခွဲများနှင့် AYA Bank ATMsစက် များ၏ တည်နေရာများကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသို့ AYA Pay မှတဆင့် ငွေလွှဲနိုင်ပါသလား။ Expand
လောလောဆယ်တော့ ထိုဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ မရနိုင်သေးပါဘူး။
AYA Pay Application ကို မည်သည့် စမက်ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။ Expand
Android ဖုန်းများအတွက် Android version 4.5.1 မှစတင်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Firmware, Jailbreak ပြုလုပ်ထားသောဖုန်းများတွင်အသုံးပြု၍မရနိုင်ပါ။)
IOS ဖုန်းများအတွက် IOS version ၉.၀ ကစတင်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
AYA Pay Application သို့ဝင်ရောက်ရန် လျှိ့ဝှက်ကုတ်နံပါတ်(Password) မေ့ခဲ့လျှင် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ Expand
လျှိ့ဝှက်ကုတ်နံပါတ် မေ့ခဲ့လျှင်AYA Pay Mobile Wallet (AYA Pay မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်)တွင်ရှိသော forget Pin link ကိုနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ် နှင့် မွေးနေ့တို့အားဖြည့်သွင်းပေးပါ။ AYA Pay team မှ (OTP)ကုဒ်နံပါတ်ကို SMSစာတို ပေးပို့ပါမည်။ ထိုပေးပို့လာသော OTPကုဒ်နံပါတ်အား အသုံးပြုပြီး လျှိဝှက်ကုတ် အသစ်(New Password )ကို ရယူ နိုင်ပါသည်။
AYAPay Mobile Wallet Application အသုံးပြုရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်သော internet network requirement (အင်တာနက် နက်ဝက်လိုအပ်ချက်)ကို သိချင်ပါတယ်။ Expand
မည်သည့် internet network(အင်တာနက် နက်ဝက်) နှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ် AYA Pay Agent ဆိုတာကို သင်ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်သည် AYA Bank ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး AYA Pay Application သုံးစွဲသူများအတွက် ဖုန်းဖြင့်လွယ်ကူစွာ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲ၊ ငွေပေးချေမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် AYA Pay ၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းကိုယ်စားလှယ်များ (ဆိုင်ရှင်များ) ဖြစ်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခကြေးငွေပေးဖို့လိုအပ်ပါသလား။ Expand
AYA Pay Agent တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခကြေးငွေ တစ်စုံတစ်ရာပေးရန်မလိုအပ်ပါဘူး။AYA Pay Agent တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည့်အကူအညီနှင့် အချက်အလက်အားလုံးကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည့် ဝန်ထမ်းများမှ ရှင်းပြပေးပါမည်။
AYA Pay Agent Application ကို လျှို့ဝှက်ကုဒ်(ပင်နံပါတ်) အပြင် Finger Print (လက်ဗွေ) ၊ Face ID တို့ဖြင့် ဖွင့်နိုင်ပါသလား။ Expand
AYA Pay Agent Application ကို လျှို့ဝှက်ကုဒ်(ပင်နံပါတ်) ဖြင့်ဖွင့်လို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသလို ဖုန်းဆက်တင်(Phone setting) တွင် Face ID လက်ဗွေဖွင့်ထားလျှင် AYA Pay App မှာလဲသုံးနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်သည် AYA Pay Agent အကောင့်မှငွေများကို မည်သို့ထုတ်နိုင်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်သည် AYA Bank မှတစ်ဆင့်နီးစပ်ရာ AYA ဘဏ်ခွဲတွင်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ- Expand
• AYA Bank နှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် AYA Bank မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ခြင်း။
• AYA Bank Account နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် သင်၏ငွေကြေးများလုံခြုံမှုရှိစေခြင်းနှင့်ငွေကြေးစာရင်းများတွက်ချက်မှုမှန်ကန်ခြင်း။
• AYA Pay သုံးစွဲသူများ၏ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲခြင်းများ၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကော်မရှင်ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ခြင်း၊
• မိမိဆိုင်သို့လာရောက်သော ဖောက်သည်အရေအတွက် ပိုများလာခြင်းနှင့် ဘဏ်နှင့်အတူတကွ အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားလာခြင်း။
• မိမိတို့၏ ငွေစာရင်းများကို AYA Pay Agent Application ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း။
• မိမိတို့ AYA Payမိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် ငွေစာရင်းထဲမှ ငွေများကို AYA Bank ငွေစာရင်းထဲသိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်း၊
• ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် အလိုအလျောက်မှတ်သားထားသော ငွေစာရင်းများရှိသည့်အတွက် အနာဂတ်တွင် AYA Bank မှ အလွယ်တကူငွေများချေးယူနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို AYA Pay ၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ကိုယ်စားလှယ်များ(ဆိုင်ရှင်များ)ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက် အနေဖြင့် မည်သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ပေးနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ-
• AYA Pay သုံးစွဲသူများ၏ မိုလ်ဘိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ငွေဖြည့်နိုင်ခြင်း(Cash in)။
• AYA Pay သုံးစွဲသူများ၏ မိုလ်ဘိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ငွေများထုတ်နိုင်ခြင်း(Cash out)။
• AYA Pay မသုံးစွဲသူများ (AYA Pay Non-wallet Customers)သည် AYA Pay Agent မှတဆင့် ငွေလွဲ/ငွေထုတ်နိုင်ခြင်း။
• Phone Bill ဖြည့်နိုင်ခြင်း။
• AYA Pay Agent မှတစ်ဆင့် ဘေလ်များပေးဆောင်နိုင်ခြင်း။(ဥပမာ- Ananda ၊ Canal+၊Stream Wallet အစရှိသည်)။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်သည် AYA Pay မှဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရန် မည်သည်တို့လိုအပ်သနည်း။ Expand
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် စမက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်အကောင့် ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
AYA Pay Merchant Account နှင့် AYA Pay Agent Account နှစ်မျိုးလုံးကို လုပ်ငန်း/ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးတည်းက ဖွင့်လို့ရပါသလား။ Expand
AYA Pay Merchant Account နှင့် AYA Pay Agent Account တို့၏ကွာခြားချက်ကို သင်သိပါသလား။ Expand
AYA Pay Merchant သည်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ရှင်သည် မိမိ၏ ဖောက်သည်များကAYA Pay ဖြင့် ပေးချေသောငွေများကိုသာ လက်ခံနိုင်ပါသည်။ငွေပေးချေမှုကိုသာ ဆောင်ရွှက်ပေးနိုင်ပါသည်။
AYA Pay Agent သည် ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်၊ငွေလွှဲခြင်းများ၊ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းနှင့်ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းများကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
AYA Pay Agent Application တွင် မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ Expand
ဟုတ်ကဲ့။မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် AYA Pay မှရရှိသော ဝန်ဆောင်ခ များကို AYA Pay Agent Application တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။ Expand
AYA Pay Agent Application တွင် Customer များ၏ ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်၊ငွေလွဲ၊ငွေဖြည့်ခြင်း၊ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း၊ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း အစရှိသည့် စာရင်းများကို နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊လစဉ် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။ Expand
ဟုတ်ကဲ့။စာရင်းများကို သုံးလစာအထိ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် AYA Pay Agent Application မှ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
AYA Pay Agent တစ်ဦးဖြစ်ရန် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay Agent တစ်ဦးဖြစ်ရန် ဧရာဝတီဘဏ်မှ သက်မှတ်ထားသော Agent Application Form ဖြည့်ရပါမည်။
လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ဆိုင်ရှင်၏မှတ်ပုံတင်၊ မှတ်ပုံတင်၏ ရှေ့ခြမ်းနှင့် နောက်ခြမ်း ဓာတ်ပုံ၊ ဆိုင် နှင့် ဆိုင်ရှင် တို့၏ဓာတ်ပုံ၊AYA Bank ငွေစာရင်းစာအုပ် တို့လိုအပ်ပါသည်။
AYA Pay Agent Application ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ။ Expand
AYA Pay Agent Application ကို www.ayapay.com မှ တစ်ဆင့် (ဒါမှမဟုတ်) Google Play Store နဲ့ Apple App Store တို့ကနေ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့။စာရင်းများကို သုံးလစာအထိ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် AYA Pay Agent Application မှ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသ ည်။
AYA Pay Agent Account မှငွေများကိုAYA Bankငွေစာရင်းသို့ရွှေ့နိုင်ပါသလား။(Move Money) Expand
AYA Pay Agent အနေဖြင့် ငွေလွှဲလက်ခံလျှင် customer ဆီမှမည်သို့သော သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ပါသလဲ။ Expand
ငွေလက်ခံသူ၏ဖုန်းနံပါတ် (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်အမှတ် လိုအပ်ပါသည်။
AYA Pay Agent အနေဖြင့် Customer သည် ငွေလာထုတ်ပါက မည်သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို customer ဆီမှတောင်းရန်လိုအပ်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay Agent အနေဖြင့် customer ငွေလာထုတ်ပါက(ငွေလွှဲကုဒ်နံပါတ်)နှင့် transaction code ()တို့လိုအပ်ပါသည်။
AYA Pay Agent Account တစ်ခုကို စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးထက်မက Log in ဝင်၍ အသုံးပြု၍ရပါသလား။ Expand
AYA Pay Agent Account တစ်ခုကို စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးထက်မက log in ဝင်၍ အသုံးပြု၍ရပါသည်။Multi-device Loginဟုခေါ်သော မိမိသတ်မှတ်ထားသော စမတ်ဖုန်းများတွင် log in ပြုလုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Agent လုပ်မယ်ဆိုရင် Agent account ထဲကိုငွေသားတိုက်ရိုက်သွင်းပေးလို့ရမလား ၊ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ မချိတ်ဘဲ ငွေသွင်းပေးလို့ရမလား။ Expand
လောလောဆယ်အထိ တိုက်ရိုက်ငွေသွင်းပေးလို့ မရသေးပါ၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့် ချိတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Agent လုပ်မယ့် Phone no. တစ်ခုထဲကနေ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်အတွက် သုံးလို့ရမလား။ Expand
မရပါ၊ Agent တစ်ဆိုင်ကို Phone no. တစ်ခုစီသုံးရပါမည်။မရပါ၊ Agent တစ်ဆိုင်ကို Phone no. တစ်ခုစီသုံးရပါမည်။
AYA Pay အနေဖြင့် Agent တစ်ဆိုင်နှင့် တစ်ဆိုင်ကို အကွာအဝေးသတ်မှတ် ထားတာ ရှိပါသလား။ Expand
AYA Pay Agent မှ ငွေလွှဲရာတွင် ငွေလက်ခံသည် ငွေမထုတ်ဖြစ်ပါက မူလပေးပို့သူထံ ငွေပြန်အမ်းပေးပါသလား။ Expand
AYA Pay Agent မှ ငွေလွှဲရာတွင် ငွေလက်ခံသူသည် ငွေမထုတ်ဖြစ်ပါက မူလပေးပို့သူထံ ငွေပြန်အမ်းပေးသော စနစ်မပါရှိပါ။ ငွေထုတ်အတည်ပြု ကုဒ်နံပါတ်အသစ်ထုတ်ပေးရန် AYA Pay Contact Center သို့ဆက်သွယ်ရပါမည်။
AYA Pay Agent Account ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်း ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် အခိုးခံရခဲ့ရင် ငွေတွေဆုံးရှံးသွားနိုင်သလား။ Expand
သင့်ငွေများမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။သင့်အကောင့်ကို သင်မှလွဲ၍ တခြားသူဝင်ရောက် သုံးစွဲွဲ၍မရပါ။ သင့် Account ရဲ့ PIN နံပါတ်ကို သိသူသာသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။မိမိဖုန်းပျောက်ဆုံးခဲ့ပါက AYA Pay Hot Line Number 5777 ကို ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာ သင့်ရဲ့ အကောင့် ကို AYA Pay ယာယီ ပိတ်သိမ်းပေးပြီး လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ် ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ကြန့်ကြာမှု၊ အဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့ရင် မည်သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းရမလဲ။ Expand
AYA Pay Hot Line Number 5777 ကို ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ဆက်သွယ်အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ် အကောင့်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုဖြစ်လျှင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ Expand
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ် အကောင့်ကို အသုံးမပြုဖြစ်သည့်ကာလသည် ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်ရှိသွားပြီဆိုပါက AYA Pay Application မှ သင်၏အကောင့်ကို ပိတ်သိမ်းသွားပါတော့မည် ဆိုတဲ့အကြောင်း သတိပေးစာပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ လက်ကျန်ငွေစာရင်း တွင်မည်သည်အပြောင်းအလဲမှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ လက်ကျန်ငွေစာရင်းသည် အလိုအလျောက် သင့် AYA ဘဏ် ငွေစာရင်းထဲရောက်ရှိသွားပါမည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အကြံပြုဆွေးနွေးလိုသည်များကို မည်သို့ပေးပို့နိုင်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay Agent Application ရှိ Feedback (အကြံပြုစာ) ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ မိမိအကြံပြုလိုသည်များကို ရေးသားအကြံပြုနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်သည် မိမိဆိုင်လိပ်စာပြောင်းလဲလိုလျှင် AYA Pay Agent Application တွင်ပြောင်းလဲရန်လိုပါသလား။ Expand
AYA Pay Application တွင်သင်၏ လုံခြုံမှုရှိစေရန် သင့်အကောင့် log in ဝင်ထားသော စမတ်ဖုန်းမည်မျှရှိနေသလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။ Expand
ဟုတ်ကဲ့။စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။သင်ကိုယ်တိုင် log in မလုပ်ထားသော စမတ်ဖုန်းများမှ သင့် AYA Pay Account ကို log out လုပ်နိုင်ပါသည်။
AYA Pay Agent application တွင် password အကြိမ်ကြိမ်မှားနှိပ်မိလျှင် Account သည် Auto lock ဖြစ်ပါသလား။ Expand
ဟုတ်ကဲ့။Password ကိုသုံးကြိမ်အထက်မှားနှိပ်မိပါက Account Auto lock ကျသွားပါမည်။
နီးစပ်ရာ AYA ဘဏ်ခွဲများ၊AYA Pay ကုန်သည်များ၊ AYA Pay ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆိုင်၊တည်နေရာများကို AYA Pay Application အသုံးပြု၍ ရှာလို့ရပါသလား။ Expand
ဟုတ်ကဲ့။တည်နေရာများကို AYA Pay Applicaction ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
AYA Pay တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော AYA Pay Agent ဟုတ် မဟုတ်ကိုမည်သို့စစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay Application တွင်ပါဝင်သော နီးစပ်ရာ AYA Pay Merchant နှင့် Agent များ၏တည်နေရာကို ရှာဖွေနိုင်သော Service Locator ကိုနှိပ်၍ သင်ရောက်ရှိနေသော ဆိုင်/လုပ်ငန်းသည် AYA Pay Agent,AYA Pay Merchant ဟုတ် မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
AYA Payကုန်သည် (AYA Pay Merchant)ဆိုတာကို သင်ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay ကုန်သည်ဆိုသည်မှာ AYA Bank ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး AYA Pay Merchant Application သုံးစွဲသူများအတွက်ဖုန်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေမှုများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် AYA Pay ၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းကုန်သည် (ဆိုင်ရှင်) များဖြစ်ပါသည်။
AYA Pay ကုန်သည် (AYA Pay Merchant) တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခကြေးငွေပေးဖို့လိုအပ်ပါသလား။ Expand
AYA Pay ကုန်သည် (AYA Pay Merchant) တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခကြေးငွေ ပေးရန်မလိုပါ။
AYA Pay Merchant တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည့်အကူအညီနှင့် အချက်အလက်အားလုံးကို ဖွင့်လှစ်ပေးသော ဝန်ထမ်းများမှ ရှင်းပြပေးပါမည်။
AYA Pay ကုန်သည်သည် AYA Pay ကုန်သည်အကောင့်မှငွေများကို မည်သို့ထုတ်နိုင်ပါသလဲ။ Expand
AYA Pay ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ Expand
• နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော အကြွှေရှားပါးမှုပြသာနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊
• AYA Pay သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ AYA Pay wallet ငွေစာရင်း များမှတစ်ဆင့် ကုန်သည်များ၏ AYA Pay Walletငွေစာရင်း ထဲသို့ ငွေတိုက်ရိုက်ပေးချေနိုင်ခြင်း၊
• ထိုသို့အလွယ်တကူငွေပေးချေနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်သဖြင့် ဖောက်သည်များပိုမိုရရှိလာခြင်း၊
• မိမိတို့၏ ငွေစာရင်းများကို AYA Pay ကုန်သည် Application ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊
• မိမိတို့ AYA Pay wallet ထဲမှ ငွေများကို AYA Bank ငွေစာရင်းထဲသိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်း၊
• ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် အလိုအလျောက်မှတ်သားထားသော ငွေစာရင်းများရှိသည့်အတွက် အနာဂတ်တွင် AYA Bank မှ အလွယ်တကူငွေများချေးယူနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို AYA Pay ၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ကုန်သည်ဆိုင်ရှင်များဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
AYA Pay ကုန်သည်သည် AYA Pay သုံးစွဲသူဆီမှ ငွေလက်ခံရန် မည်သည်တို့လိုအပ်သနည်း။ Expand
ဆိုင်ရှင်၊ကုန်သည်များအနေဖြင့် စမက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ AYA Pay ကုန်သည်အကောင့် ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
AYA Pay ကုန်သည်အကောင့် မှ AYA Pay သုံးစွဲသူအကောင့် ကို ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ပါသလား။ Expand
AYA Pay ကုန်သည်အကောင့် မှ AYA Pay သုံးစွဲသူအကောင့် ကို ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှု မပေးနိုင်ပါ။
AYA Pay သုံးစွဲသူမှ မိမိဆိုင်ရှိကုန်ပစ္စည်းများ၊ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူ၍ငွေပေးချေသောအခါ AYA pay ကုန်သည်သည် AYA Pay Application မှတစ်ဆင့်ငွေလက်ခံနိုင်ပါသည်။
AYA Pay Merchant Application တွင် Customer များ၏ AYA Pay Application ဖြင့် ပေးချေထားသော အရောင်းစာရင်းများကို နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊လစဉ် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။ Expand
ဟုတ်ကဲ့။အရောင်းစာရင်းများကို သုံးလစာအထိ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် AYA Pay Merchant Application မှ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
Merchant Discount Rate (MDR) ဆိုတာကို သင်ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ။ Expand
MDR သည် AYA Pay ကုန်သည်များမှ AYA Pay ၏ဝန်ဆောင်မှုများသုံးစွဲခြင်းကြောင့်AYA Pay
(မှတ်ချက်။ ။MDR သည် ကုန်သည်များ၏လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူ AYA Pay Merchant Account ဖွင့်သောအခါ AYA Pay Team မှရှင်းလင်းပြောပြပေးပါမည်။
AYA Pay Merchant သည် Customer ကိုငွေပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသလား။ Expand
AYA Pay Merchant သည် customer ကိုငွေပြန်ထုတ်မပေးနိုင်ပါ။
AYA Pay Merchant Account တစ်ခုကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးထက်မက ပို၍သုံးနိုင်ပါသလား Expand
မူလ AYA Pay Merchant Account ပိုင်ရှင်က ခွင့်ပြုလျှင် အသုံးပြုသူဦးရေ အကန့်အသတ်မရှိ သုံးနိုင်ပါသည်။
AYA Payကုန်သည် (AYA Pay Merchant) ဖြစ်ချင်ရင် ဘာတွေလိုအပ်သလဲ။ Expand
AYA Pay ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်ရန် ဧရာဝတီဘဏ်မှ သက်မှတ်ထားသော Merchant Application Form ဖြည့်ရပါမည်။
AYA Pay Merchant Account မှငွေများကိုAYA Bankငွေစာရင်းသို့ရွှေ့နိုင်ပါသလား။(Move Money) Expand
AYA Pay သုံးစွဲသူသည် ကုန်သည်၏ဆိုင်တွင် ငွေပေးချေရာတွင် မည်သို့ပေးချေနိုင်သနည်း။ Expand
AYA Pay ကုန်သည် ဆိုင်ရှိ QR Code ကိုScan ဖတ်ပြီးပေးချေ၍သော်လည်းကောင်း ၊ Gallery ထဲမှ ကုန်သည်၏ QR ကို Auto Scan ဖတ်၍ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
AYA Pay ကုန်သည်သည် မိမိဆိုင်လိပ်စာပြောင်းလဲသွားပါက AYA Merchant application တွင်ပြောင်းလဲရန် လိုပါသလား။ Expand
© 2022 AYAPAY DIGITAL WALLET | Powered by AYA Bank